05 August 2021 Volume :9 Issue :34
UDkt uTanja Reinhardt (uDkt T) enza umkhankaso wesayensi esikoleni samabanga aphansi eRhini.Click here for English version
I-Science and Technology Education Centre ithole ukugunyazwa eMnyangweni WezeSayensi Nezokuqamba i-Department of Science and Innovation (i-DSI) ne-National Research Foundation (i-NRF) i-South African Agency for Science and Technology Advancement (i-SAASTA), okuyibeke esicongweni nezinye izikhungo zaseNingizimu Afrika ngokugqugquzela uthando lwesayensi entsheni.
I-STEC@UKZN, engenye yezindawo eziyisithupha zesayensi KwaZulu-Natali, ezihlose ukutshala uthando kubafundi nokubakhuthaza ukuthi bafundele imisebenzi yeSayensi, Ubuchwepheshe neZibalo, phecelezi i-Science, Technology, Engineering and Mathematics (i-STEM). Lesi sikhungo esiphethwe nguDkt Tanja Reinhardt (odume ngoDkt T) kwezinye izinto esizenzayo kukhona ukwenza izinto bukhoma, imibukiso, amaphosta, izinkulumo, izithangami zokucijana nemibukiso yezesayensi. Njengoba sigabe ngabantu abawongoti, kuvame ukwenziwa izinhlelo zabafundi nezabafundisi kanti u-Reinhardt akasali emicimbini yaseNyuvesi enjengama-Open Day, i-Royal Show ne-Wonder Women in Science. Ithimba le-STEC libambisene ne-Eskom Expo for Young Scientist, lapho u-Reinhardt evame khona ukwenza izithangami zokubacija ngobuchwepheshe besimanje ezingama-15 ezingeni likazwelonke.
I-STEC@UKZN ihlanganise i-Geology Education Museum ophikweni oluse-UKZN, engafani namanye esifundazweni ngenxa yamaminerali ehlukile, amafosili namadwala atholakala khona. Lesisikhungo, sibambisene nezinye izikhungo zesayensi esifundazweni nabalingani basemhlabeni jikelele, sibambe iqhaza emicimbini enjengo-Umjikelezo We-Science outreach collaboration ukuqhakambisa izifundo nemisebenzi esemkhakheni we-STEM ezikoleni ezisemaphandleni.
UMnyango WezeSayensi neZokuqamba unohlelo lwezwe lonke lokubambisana kwezikhungo zesayensi olugqugquzela ukufundisa ngesayensi, lwandise iqhaza labafundi kwezeSayensi, Ezobuchwepheshe, Ezobunjiniyela neZezibalo, lubheke futhi ithuthukise ikhono lentsha kwezeSayensi, Ezobuchwepheshe, Ezobunjiniyela neZezibalo nethalente kulomkhakha, wakhe amathuba emfundo kulemikhakha.
Ukugunyazwa yindlela yokusungula nokugcina lomfelandawonye ngokwenza ukuthi izikhungo zithembakale, nokuthuthukisa izikhungo zesayensi ezikhona nezintsha ngokwemigomo, ukwenza amaxhama okuxhumana phakathi kwezikhungo ezigunyaziwe, ukudala amathuba okuxhaswa ngokwezinhlelo nengqalasizinda, ukusungula indathane yemibukiso nezinhlelo nokwenza inkundla yokuhlonishwa emhlabeni jikelele. Nge-SAASTA, kunezinhlelo zokuqeqesha abasebenzi bezikhungo zesayensi ukuthuthukisa amakhono.
Uhlelo lokugunyazwa lunezigaba ezihlukene zokuhlolwa, nokuholele ekutheni i-STEC@UKZN ifakwe ohlwini lwesikhungo sezesayensi esisathuthuka. Izobambisana noMnyango nophiko lwe-SAASTA i- Science Awareness Platform ukwenza uhlelo lwesikhungo nokunquma izikhathi nosizo okudingeka e-STEC@UKZN ukuphucula ukusebenza kwayo nendawo esebenzela kuyona. ‘Sibonga kakhulu kwi-SAASTA noMnyango ngenkundla yokugunyazwa nokusinika ithuba lokubamba iqhaza ohlelweni lokugunyazwa,’ kusho u-Reinhardt.
‘Nakuba bekuyindlela ende, ebinomqulu wokuzihlola omude nokubuyekezwa ngabalingani bakho, kusenze sabona ukuthi singobani, yini esikwazi ukuyenza kahle, yiziphi izindawo esingaphucula kuzona nokuthi i-South African Science Centre ingontanga baziphi ezinye izikhungo emhlabeni. Ukukalwa ngemigomo emile kunika abantu abangaba ngabaxhasi ubufakazi ukuze kube lula ukukhipha usizo lokuxhaswa koMnyango ne-SAASTA.’
I-SAASTA ibonge i-STEC@UKZN ngomsebenzi wokuzikhandla wayo, ukuphokophela nokuxhumana nabantu besikhungo sezesayensi ngokuphosa esivivaneni somsebenzi we- SAASTA ezikhungwini zesayensi.
Ngesikhathi kudlange umvalelandlini eNingizimu Afrika ngenxa yobhubane i-COVID-19, u-Reinhardt usabalalisele isikhungo kubafundi ngezithangami ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe besimanje ukuze zenzeke ngamaholidi. Kusetshenziswa izinto ezitholakala kalula emakhaya amaningi, lezizithangami zokufundisa zenza kube lula ukufundela emakhaya ezinganeni ezibhajwe emakhaya.